Ropeway Nepal: 2016
बाजुरा जिल्लामा रहेको बडिमालिका धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका दृष्टिबाट प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो।
समुद्री सतहबाट करिब ४२ सय मिटर उचाइमा रहेको बडिमालिका जान बाजुरा सदरमुकाम मार्तडिबाट तीन दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्छ। तस्वीरहरु: मधुसुदन दाहाल
यात्रा सुरु हुँदा देखि नै गाउँलेले बाटोमा पुजाको थाली राखेर तीर्थयात्रीको यात्रा सफल होस् र बडिमालिकाले सबैलाई आशिर्वाद दिउन् भन्ने कामना गर्छन्।
बाटोमा खाने बस्ने व्यवस्था नभएको उक्त क्षेत्रमा जनैपूर्णिमाको मेला बाहेक अन्य समयमा कमै मानिस घुम्न जाने गर्छन्।
बाटामा थुप्रै साना मन्दिर, वन्यजन्तु, खोला, झरना आदि मनै लोभ्याउने दृश्य देख्न पाइन्छ।
दोस्रो रात बास बस्नका लागि त्रिवेणीधाम पुगिन्छ। तीनवटा नदीको संगम रहेको उक्त क्षेत्रमा धेरै मानिसहरुले आफ्ना स्वर्गीय बाबुआमाको श्राद्ध गर्ने गर्छन्।
त्रिवेणीधामबाट कहिले तेर्सो र कहिले कहालीलाग्दो उकालो करिब ६ घण्टा हिडेपछि बडिमालिका पुगिन्छ।
वर्षमा धेरै समय हिउँ पर्ने बडिमालिकामा नेपाल र भारतका थुप्रै भक्तजन आउने गर्छन्।
धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनको विशेष सम्भावना रहेको यस क्षेत्रमा पुग्न काठमाण्डूबाट झण्डै डेढ साता लाग्ने गर्छ।
प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण त्यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि सरकारले खासै योजना नल्याएको स्थानीयबासी गुनासो गर्छन्।
जनैपूर्णिमाको बेला चतुर्दशीको दिन बडिमालिकामा लाग्ने विशेष मेलामा पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि नै सरकारी स्तरबाट पूजा गर्ने गरिएको छ।
बडिमालिकाको दर्शन गरे चिताएको पुग्छ भन्ने जनविश्वासले बाजुरा वरपरका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा भक्तजनहरु आउने गर्छन्।
बडिमालिकामा जनैपूर्णिमाको दिन राति १२ बजेदेखि नै तीर्थयात्री पूजा गर्नका लागि लाम लागेर बस्ने गर्छन्।
बडिमालिका पुग्ने उकालोको यात्रा जति नै कठिन भए पनि आँखाले देखेका अनुपम दृश्य संगाल्दै ओरालो झर्न भने निकै रमाइलो हुनेगर्छ।
Posted by Quality King at 10:59 AM No comments:
ओलीको चन्द्रागिरी यात्रा (फोटो फिचर)
‘म पनि गेन्टिङ हाइल्याण्ड गएको थिएँ, योजना (केवल कार बनाउने) त मेरो पनि थियो, पैसा थिएन'
- -शेखर अधिकारी, काठमाडौं
भाद्र २२, २०७३- दुई साता थाइल्याण्डमा उपचार र आराम गरेर फर्किएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपत्यकाको पहिलो केवल कार चन्द्रागिरीमा देखिए ।
ओली पत्नी राधिकासहित पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरुसहित बिहान पौने १० बजेतिर चन्द्रागिरी पुगेका थिए । चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि.को ४ अर्बभन्दा बढीको प्रोजेक्ट अवलोकनमा पहिलोपटक पुगेका ओली ४ घण्टाभन्दा बढी चन्द्रागिरीमै बिताए ।
ओलीले प्रोजेक्ट अवलोकनमात्रै गरेनन्, नेपाल पर्यटन बोर्डको ‘घुमफिर वर्ष’ प्रबर्द्धनका लागि पार्टीको पर्यटन इलाका कमिटीले चन्द्रागिरी डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि सहभागी भए । चन्द्रागिरीमा ओलीसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, चारजनै उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहरा, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलसहित दुई दर्जन शीर्ष नेता पुगे ।
चन्द्रागिरी बेसक्याम्पमा सबै नेताहरुलाई चन्द्रागिरी हिल्स प्रा.लि.का अध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितले स्वागत गरे । बेसक्याम्पको होटलमै ब्रेकफास्टपछि नेताहरु केवल कारबाट डाँडातिर गए ।
केवल कारको गोन्डामा ओलीसँगै पत्नी राधिका, चन्द्रागिरी केवल कारका चन्द्र ढकाल, प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीसहित सुरक्षाकर्मी चढे । कमजोर स्वास्थ्यका बाबजुत पुगेका ओलीलाई चन्द्रागिरी डाँडाको अपर बेस स्टेशनदेखि मन्दिर र सेमिनार हलसम्म पुग्न गाडीको व्यवस्था गरिएको थियो । उनी अपस बेस स्टेशनदेखि सेमिनार हल पुगे ।
सेमिनार हलमा केही मिनेट बसेपछि उनी भालेश्वर मन्दिर दर्शनका लागि गए । उनीसँगै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले पनि मन्दिर दर्शन गरे ।
मन्दिरकै छेवैमा रहेको ऐतिहासिक चन्द्रागिरी डाँडाबाट काठमाडौं अवलोकन गरे । जहाँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण अभियान सुरु गरेको किंवदन्ती सुनाइयो । उनले पनि जुँगामा ताउ लगाए । उद्यमी ढकालले भने, ‘अध्यक्षज्यू भालेश्वर मन्दिरमा जे मागे पनि पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।’
ओलीलाई पार्टीकै नेताले सोधे, तपाईं के माग्नुहुन्छ ? ओलीले माग्दिन भन्दै मुन्टो हल्लाए । ‘म वर माग्छु,’ नेता केशव बडालले भने, ‘देशमा शान्ति, सुव्यस्था, सुशासन र विकास होस् ।’
अवलोकनमा ओलीले ढकाललाई लगानी रकम, लगानीकर्ता र सेवा सुविधानबारे सोधे । उनले केही दिनअघि केवल कार लामो समय अड्किएको भन्नेबारे पनि जिज्ञासा राखे । ढकालले प्रोजेक्ट कन्सेप्टदेखि केवल कार रोकिएकोबारे बेलिबिस्तार लगाए ।
पछि सेमिनार हलमा भएको कार्यक्रममा ढकालले सन् २००१ मा मलेसियाको गेन्टिङ हाइल्याण्डमा जाँदा आफूलाई केवल कार बनाउने योजना फुरेको बताए । उनले बैंकको सामान्य कर्मचारीदेखिदेखि सुरु भएको व्यवसायिक यात्रा पनि सुनाए ।
ढकालले डेडिकेटेड विद्युत् लाइन नहुँदा केवल कार रोकिने समस्या छिटफुट देखिएको बताउँदै नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराए ।
संक्षिप्त कार्यक्रमका एक्ला वक्ता ओलीले ढकालको कन्सेप्टको प्रशंसा गर्दै चन्द्रागिरी केवल कारको सफलताको कामना गरे । ‘म पनि गेन्टिङ हाइल्याण्ड गएको थिएँ, योजना त मेरो पनि थियो,’ उनले भने, ‘तर पैसा थिएन, चन्द्रजीसँग पैसा थियो, काम गर्नुभयो ।’
ओलीले नेपाल प्राकृतिकरुपमा धनी रहेको बताउँदै एकपटक नेपाल घुम्नैपर्ने सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ३ अर्ब पर्यटक नेपाल भित्र्याउने योजनालाई भने हावादारी भएको बताए ।
डेडिकेटेड विद्युत् लाइन जोडिदिन गरेको आग्रहमा ओलीको भनाइ थियो, ‘अहिलेको सरकारलाई भनौंला, तर गर्लाजस्तो लाग्दैन, अली समय पर्खनुस् अर्को सरकारले तपाईंको माग पूरा गर्छ ।’
ओलीले ढकाललाई उनको प्रोजेक्टका लागि केही सुझाव दिए । होटलमा सबै खालको आर्थिक हैसियत भएकाले खर्च गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । सँगै भने, ‘अब पृथ्वीनारायण शाहले जुँगामा ताउ लगाएको सालिक पनि राख्नुस् ।’
चन्द्रगिरि पहाडका दुईवटा विशेषता छन्ः पुथ्वीनारायण शाहले यहीँबाट पहिलोपटक काठमाडौं देखेका थिए र उनमा उपत्यका कब्जा गर्ने तृष्णा पलाएको थियो । अर्को, चन्द्रगिरि पहाडबारे धेरैले स्वस्थानीको किताबमा पढेका छन् कि यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ सतिदेवीको भाल पतन भएको थियो ।
तर, अहिले चन्द्रगिरि पहाडको तेस्रो विशेषता थपिएको छ: तपाई थानकोटबाट १४ मिनेटमै केवलकार चढेर डाँडाको टुप्पामा पुग्न सक्नुहुन्छ । र, जिउँदै स्वर्ग पुगेको अनुभव संगाल्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईले कामको चटारो र तनावका बीच काठमाडौंको धुँवाधुलो, कोलाहल एवं एकोहोरो दैनिकीलाई केही आराम दिनेबारे सोच्नुभएको छ ? अब पनि तपाईंले एक दिन ‘रिफ्रेस’ हुन काठमाडौं नजिकै कुनै ठाउँ छ र भन्ने प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो गलत सावित हुनेछ ।
अब तपाईं केबलकार चढेर झण्डै १४ मिनेटमै काठमाडौंको चुचुरो चन्द्रागिरिमा पुग्न सक्नुहनेछ र पूरै दिन प्राकृतिक एवं मनोरम वातावरणमा रमाउन पाउनुहनेछ ।
चन्द्रागिरिमा रहेको भालेश्वर मन्दिर परिसरमा भेटिएका काठमाडौं बसन्तपुर घर भएका नरोत्तम बज्राचार्यले भने, ‘यो त अजीवको ठाउँ रहेछ । काठमाडौंमै भएको यस्तो अद्वीतीय पहाड अहिलेसम्म गुमानामजस्तै थियो, केबलकारले जोडेर यो ठाउँलाई विश्वमाझ चिनाउन सकिन्छ भन्ने प्रष्ट भयो ।’
बज्राचार्यले काठमाडौंको कोलाहलबाट निस्किएर छोटो समयमै परिवारका साथ रमाउन चन्द्रागिरि उपयुक्त गन्तव्य भएको बताए । उनीमात्रै होइन, चान्द्रगिरी डाँडामा भेटिएका अधिकांशको भनाइ यस्तै सुनिन्छ ।
धर्म कमाउने गन्तव्य
थानकोटबाट चन्द्रागिरि हिल्स प्रालिले सञ्चालन गरेको केबलकार चढेर दिनहुँ चन्द्रागिरिमा भालेश्वर महादेवको मन्दिरमा दर्शन गर्न पुग्नेहरुको संख्या बाक्लिन थालेको छ ।
काठमाडौंको इमाडोलबाट भालेश्वर मन्दिरमा आएकी ७८ वर्षीया डोलदेवी सिंखडाले भालेश्वर महादेवको दर्शन गर्न पाउँदा आफूले भाग्यमानी महसुस गरिरहेको बताइन् ।
‘चन्द्रागिरिमा सतिदेवीको निधार पतन भएर भालेश्वर महादेव उत्पन्न भए भनेर उहिलेदेखि सुन्दै आएकी हुँ, आज सजिलैसँग उनै भगवानको शरणमा आउन पाउँदा मनमा आनन्द लागेको छ’ सिंखडाले भनिन् ।
उनले थपिन्-‘हामी पुराणमा भगवान वायुपंखी विमानमा स्वर्ग गए भनेर सुन्छौं । भगवानको बास भएको यस्तो अलौकिक पर्वतमा कष्ठ नै नगरी केलवकारमा सरर आउँदा स्वर्गको टुक्रामै आएजस्तै भयो । मरेपछिको स्वर्ग कस्तो छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन, हामीले देख्न सक्ने स्वर्ग यही त हो ।’
डोलदेवीले भनेजस्तै महादेवले सतिदेवीको मृत शरीर बोकेर पृथ्वी भ्रमण गर्ने क्रममा चन्द्रागिरि पर्वतमा पुगेको हिमवत खण्डमा उल्लेख छ । चन्द्रागिरिको चुचुरोमा महादेव पुग्दा सतिदेवीको भाल अर्थात निधार पतन भएको र शिवलिङ्ग उत्पति भएको हिमवत् खण्डको ९८ र ९९ औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ ।
भाल पतन भएर उत्पत्ति भएका महादेवलाई भालेश्वर भनी पुकार्न थालिएको धर्मग्रन्थहरुमा उल्लेख छ ।
भालेश्वर महादेवको दर्शन गरेर स्वर्गका सुमुख नामक गन्धर्व र पाटन निवासी विरुपाक्षले पापबाट मुक्ति पाएका कथाहरु धर्मग्रन्थहरुमा उल्लेख छन् । यसरी पौराणिक कालदेखि नै आफ्ना भक्तको मनोकांक्षा पूरा गर्ने भालेश्वर महादेवको दर्शन गराउनका लागि यहाँ आकर्षक मन्दिर निर्माण गरिएको छ ।
मन्दिरको दर्शन गर्दा सबैलाई आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त हुन्छ । यो मन्दिरमा दर्शन गर्दा मनले चिताएका सबै पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।
मन भुलाउने सौन्दर्य
चन्द्रागिरि मा अहिले केबलकार चढेर जानेहरुको बिहानैदेखि भीड लाग्छ । केवलकार सञ्चालन भएदेखि नै भालेश्वर महादेवको मन्दिर दर्शन गर्ने र त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यसँग रमाउनेहरुको नयाँ गन्तव्य बनेको छ यो स्थान ।
छिनछिनमै बदलिरहने मौसमका कारण पहाडमा ठोकिन्न आइपुग्ने सेतो बादलका बीचबाट केबलकारमार्फत चन्द्रागिरि पुग्दा स्वाभाविक रुपमा सबैलाई आनन्द महसुस हुन्छ ।
चन्द्रागिरिको चुचुरोबाट सर्वोच्च शिखर सगरमाथासमेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, नेपालका अधिकांश हिमालहरु यहाँबाट देख्न सकिन्छ । करिब १८० डिग्रीको रेन्जमा थुप्रै हिमश्रृंखलाको अवलोकन गर्ने काठमाडौंमा चन्द्रगिरीजस्तो अर्को सहज ठाउँ छैन ।
सूर्योदय र सूर्यास्तको अवलोकन लागि चन्द्रागिरि पहाड एउटा उपयुक्त गन्तव्य हो । हिमालय छिचोलेर उदाउने सूर्योदय र पश्चिम पहाडमा डुब्ने सूर्यास्तको दृश्य चन्द्रागिरि बाट रोमाञ्चक देखिन्छ ।
हिमाल, बादल, हरियाली, प्राकृतिक चिसो र उपत्यका तथा दक्षिण भेगमा रहेका साना गाउँवस्तीहरुको मनोरम दृश्यवलोकनमा रमाउनेहरुका लागि यो एउटा स्वर्गको टुक्रा भन्दा कम लाग्दैन ।
चन्द्रागिरिमा खोटाङबाट काठमाडौं घुम्न आएका श्रीकृष्ण थापा पनि भेटिए । उनले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणका अभिलाषा जन्माउने ठाउँ भएकाले चन्द्रागिरि घुम्न आएको बताए ।
‘नेपाल एकीकरणका बेला पृथ्वीनारायण शाहले चन्द्रागिरि बाट काठमाडौं हेरेको र यहाँबाट देखिएको दृश्यले काठमाडौं जित्ने अठोट गरेको भन्ने पढेका थियौं,’ उनले भने,’थोरै खर्चमा यस्तो अविश्वसनीय ठाउँमा आउन पाइने भएपछि साथीहरु लिएर आएँ ।’
उनले भनेजस्तै पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो ससुराली मकवानपुरबाट आफ्नो राज्य गोरखा फर्कंदा चन्द्रागिरि हुँदै फर्केको र काठमाडौंको अवलोकनपछि त्यसलाई जित्ने कल्पना गरेको उनका उपदेशमा उल्लेख छ ।
शाहको यो यात्रामा साथै रहेका दुई ज्योतिषी भानु अज्र्याल र कुलानन्द ढकालले त्यतिबेलै आफ्ना राजाको इच्छा पूरा हुने भविष्यवाणी समेत गरेको इतिसकार प्रा.डा. दिनेशराजपन्तले उल्लेख गरेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले पर्वतमा बसेर आध्यात्मिक साधना गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामाथि आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेको जनविश्वास समेत छ ।
चन्द्रागिरिमा अहिले सबै उमेर समूहका पर्यटकहरु पुगिरहेका छन् । धेरैले कल्पनासम्म नगरेको चन्द्रागिरि पर्वत पुग्ने इच्छा सहजै साकार हुने भएपछि यो काठमाडौंमा नयाँ आकर्षणको केन्द्र बनेको छ ।
केबलकारको क्षमता र लाग्ने खर्च
चन्द्रागिरिको केबलकारमा आउने-जाने यात्रा गर्दा ७ सय रुपैयाँ भाडा लाग्छ । यो सुविधालाई धेरैले रुचाएका छन् । आइडी कार्ड भएका विद्यार्थी, थानकोटका स्थानीय बासिन्दा, ३ फिटभन्दा होचा बालबालिका र अपांगहरुलाई विशेष छुटको प्रवन्ध गरिएको छ ।
केबलकारको बेस स्टेशन थानकोटमा छ । थानकोटबाट केबलकारमा चन्द्रागिरि पुग्न केबलकारमा ९ देखि १४ मिनेट लाग्छ ।
पर्यटक तथा दर्शनार्थी ओसार्न ३८ वटा क्यारियर सञ्चालन गरिएको आइएमई समूहका जनसम्पर्क व्यवस्थापक राजु पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए । एउटा क्यारियरमा ८ जनासम्म अटाउँछन् । यिनले दिनमा झण्डै १० हजार पर्यटकलाई चुचुरोमा पुर्‍याउने र फिर्ता गर्ने क्षमता राख्छन् ।
‘काठमाडौंभित्रैबाट केबलकार चढेर धार्मिकरुपले विशेष महत्व राख्ने मन्दिरसम्म आउनु आफैंमा अनुपम छ । झनै चन्द्रागिरिको चुचुरोबाट अभूतपूर्व प्राकृतिक सौन्दर्यतलाई नियाल्न पाइने भएकाले धेरैले यसलाई नयाँ र उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा स्वीकारेर यहाँ आइरहनुभएको छ’ पौडेलले भने ।
स्वादका पारखीलाई पनि विशेष
चन्द्रागिरि बाट काठमाडौं उपत्यकाको दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ । त्यहाँ भ्यु टावर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । तर, पनि उच्च ठाउँ भएकाले दृश्यावलोकनका लागि टावर नै भने चढ्नुपर्ने अवस्था छैन ।
चन्द्रागिरि पुगेर मन्दिर दर्शन गर्ने तथा दृश्यावलोकनमा रमाउनेहरुलाई खाना-खाजाको उच्चस्तरको प्रवन्ध गरिएको छ । ग्राहकको अर्डर अनुसार सबै किसिमका परिकारहरु मन्दिर परिसरमा सञ्चालन गरिएको होटलमा उपलब्ध छ । चिसो मौसममा स्वादिष्ट परिकारका साथ रमाउन चाहानेहरुका लागि पनि यो राम्रो गन्तव्य हो ।
अभिभावकका साथ पुग्ने बालकालिकालाई रमाउन चिल्ड्रेन पार्कको पनि व्यवस्था छ । चन्द्रागिरिमा उच्च स्तरको सभाहल पनि निर्माण भइसकेको छ । यहाँ सभा, सेमिनार र गोष्ठी लगायत कार्यक्रमहरु पनि गर्न सकिन्छ । यस्तै चन्द्रागिरिमै रिसोर्ट निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा चलिरहेको छ ।
तस्वीर: कमल प्रसाईं/अनलाइनखबर
चन्द्रगिरि पहाडका दुईवटा विशेषता छन्ः पुथ्वीनारायण...